Ao anatin’ny ady iray hafa isika amin’izao fotoana izao. Tsy ady amin’ny fitaovam-piadiana izy ity. Ady amin’ny eritreritra sy ny teny ary ny zavatra atao izany. Ady amin’ny fahotana izany ary tena mila ampahatsiahivina ireo didy mihoatra ny teo aloha isika. Toa lasa fenitra arahana ny firehan-kevitra lahika ary maro amin’ireo zavatra inoana sy zavatra atao ao anatin’